बैंकलाई लाइसेन्स दिनुपूर्व ब्रोकरले शाखा बढाउन पाउनुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता बैंकलाई लाइसेन्स दिनुपूर्व ब्रोकरले शाखा बढाउन पाउनुपर्छ
on: १९ बैशाख २०७६, बिहीबार १२:३७ अन्तरवार्ता
भरत रानाभाट, अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपाल
धितोपत्रको दोस्रो बजारका संस्थागत लगानीकर्ताले पहिलादेखि नै प्यानको प्रयोग गर्दै आएका थिए । ठूला लगानीकर्ता धेरैसँग पहिले नै प्यान थियो । जोसँग प्यान छैन, उनीहरूले लिन त्यति गाह्रो कुरा भएन । अहिले हामीले जोसँग प्यान छ, उनीहरूको प्रयोगमा ल्याएका छौं । जोसँग छैन, उनीहरूलाई लिएर आउन भनिरहेका छौं । अहिले ५ लाखभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई प्यान ल्याउन भनिरहेका छौं ।
प्यान कार्यान्वयनपूर्व यसले बजारमा नकारात्मक असर गर्छ भन्ने खालको लगानीकर्ताको गुनासो पनि थियो । तर प्रभाव सकारात्मक देखियो नि ?
बजारमा केही नयाँ कुरा आउँदै छ भन्दा त्यसले नकारात्मक असर नै गर्छ कि भन्ने मानसिकता हामीमा छ । यो त्यसकै उपज हो जस्तो लाग्छ । तर अवस्था उल्टो भइदियो । सिस्टममा जाँदै गर्दा निश्चित अवधिसम्म त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिएला कि भन्ने हो । तर सिस्टममा गइसकेपछि दीर्घकालमा त्यसको असर सकारात्मक नै हुन्छ । प्यान कार्यान्वयनमा आउनु भनेको एउटा लगानीकर्ताका लागि त राम्रो कुरा हो । भोलिका दिनमा त्यो लगानीकर्तालाई कर चुक्ता लिन पनि सहज हुन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर लगानीकर्ताले प्यान कार्यान्वयनलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ ।
अहिले पूँजीबजारमा सुधार आउनुको कारण के होला जस्तो लाग्छ ?
पूँजीबजारमा पनि सिजन र अफसिजन भन्ने गरिएको छ । त्यस्तै तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण आइसकेपछि आगामी दिनमा त्यो कम्पनीले कति लाभांश दिन सक्छ भनेर लगानीकर्ताले विश्लेषण गर्ने गर्छन्, अर्को कारण यो पनि हुन सक्छ । लाभांशका लागि लामो समय कुर्नु परेन । अर्को कुरा बजेट आउने समय हो । जब बजार धेरै डाउन ट्रेन्डमा गयो, त्यसपछि सरकारले नै बजारलाई माथि उठाउन केही नीतिगत कुरा अघि सारेको छ । तीमध्ये कतिपय कुरा बजेटबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने छन् । ती विषय सम्बोधन हुनेमा लगानीकर्ता विश्वस्त भएका हुन सक्छन् । त्यस्तै तेस्रो त्रैमास समाप्तिपछि चौथो त्रैमासमा सरकारले गर्ने खर्चहरू अन्य त्रैमासमा भन्दा बढी हुन्छ । त्यसले गर्दा बजारमा देखिएको तरलता अभाव सहज हुने हिसाबले त्यसको असर बजारमा देखिएको हुन सक्छ ।
पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्था के छ ?
नयाँ सिस्टम लागू हुँदा शुरूका दिनमा केही समस्या थिए । तर पछिल्ला दिनमा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न खासै समस्या देखिएको छैन । शुरूका दिनमा नयाँ सिस्टमलाई स्वीकार्न सबै जनालाई अप्ठ्यारो नै भएको हो । अनलाइन कारोबार प्रणालीको कार्यान्वयन हुँदै जादा बजारलाई राम्रै भएको छ । हामीले पनि अनलाइन लागू भएपछि बजारमा राम्रो प्रभाव पर्ने सोचेका पनि थियौं । अहिले बजार केही बढ्न थालेपछि लगानीकर्ता पनि अनलाइन लगइनका लागि बढी आकर्षित भएका छन् । अहिले लगानीकर्ताहरू आफैले अनलाइनमार्फत राम्रो कारोबार पनि गरिरहेका छन् ।
अनलाइन लगइन लिन लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका छन् भन्नुभयो । तर लगानीकर्ताले ब्रोकरबाट लगइन लिन समस्या भएको गुनासो पनि गरेका छन् । यसमा साँच्चै समस्या छ ?
लगानीकर्ताको सोच भनेको मैले माग्नेबित्तिकै युजर नेम र पासवर्ड पाउनुपर्छ भन्ने छ । तर सिस्टमले त्यो लेभलको सर्भिस दिन सकेको छैन । किन सकेको छैन भने पहिले एउटा लगानीकर्ताले जति पनि खाता खोल्न पाउँथे र धेरै ठाउँबाट कारोबार पनि गरिरहेका थिए । तर उसको युनिक क्लाइन्ट कोड जेनेरेट भएको थिएन, जसले गर्दा लगानीकर्ताको सम्पूर्ण जानकारी मेरोमा र अर्कोकोमा फरक पनि पर्न सक्थ्यो । अहिले त्यो ट्र्याकिङ हुन्छ । अर्को डिम्याट खाता पनि इन्ट्रिगेट गर्नुपर्‍यो । यसका लागि एक/दुई दिन त लाग्छ । हामी ब्रोकरहरूलाई जति धेरै युजर नेम र पासवर्ड दिन सक्छौं, त्यति नै धेरै फाइदा हुन्छ । त्यो हिसाबले ब्रोकरहरूले लगइन नदिने भन्ने कुरै हुँदैन ।
लगानीकर्ताले अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई अलमल्याउन ब्रोकरहरू नै लागेको आरोप पनि लगाएका छन् । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो आरोप नबुझेर लगाएको हुन सक्छ । अहिले ६ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले अनलाइन लगइन लिएको अवस्था छ, जसले कारोबार बढ्ने अवस्था सृजना भएको छ । अनलाइन कारोबार हुँदा सबैभन्दा बढी फाइदा ब्रोकरलाई हो । अनलाइन हामीले नै प्रयोग गरिरहेका छौं । समस्या पनि हामीले नै पत्ता लगाइरहेका छौं । सम्बन्धित निकायलाई अनलाइनको यहाँचाँहि समस्या छ भन्दा यो आरोप आएको हुन सक्ला । तर ब्रोकरहरू भने अनलाइन कारोबारको सफलताका लागि लागिपरेका छन् ।
युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेका लगानीकर्ताले सहज रूपमा अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न सकेको अवस्था छ ?
अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न त्यति धेरै गाह्रो छैन । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न थालिसकेका लगानीकर्ताहरू कम्प्युटर चलाउन नजान्ने कम नै हुनुहुन्छ । अर्को कुरा, धेरैजसो लगानीकर्ताले मेरो शेयरको एप प्रयोग गरिहेकाले अनलाइन सिस्टम चलाउन सहज भएको छ ।
बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुहु“दैन भन्ने ब्रोकरहरूको तर्क छ । सबै ब्रोकरहरूको भनाइ यही हो ?
यसलाई हामीले दुई हिसाबमा हेर्नुपर्छ होला । हामीले मात्र होइन, बजारका विशेषज्ञहरूले समेत बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुहुँदैन भनिरहेका छन् । हामीले के मात्र भनेको हो भने बैंकलाई दिने नै हो भने पनि उनीहरूलाई दिनुभन्दा पहिला ब्रोकरहरूलाई शाखा विस्तार गर्न दिनुपर्छ । अनलाइन कारोबार शुरू भइसक्यो, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि समय लाग्ला । यो समयमा ब्रोकरलाई शाखा विस्तार गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ब्रोकरले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिनुस् भनेर हुने पनि होइन नि त । अहिलेको अवस्थामा नियामक निकायले भइरहेका ब्रोकर कम्पनीको अवस्था के छ, नयाँ ब्रोकरहरू थपिँदा बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था छ/छैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ ।
मार्जिन कर्जा दिने बाटो खुले पनि अझै यसको कार्यान्वयन भएको छैन । के भइरहेको छ ?
मार्जिन कारोबारका लागि पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिको कुरा थियो । अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिफारिशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि पुनः नेप्सेले स्वीकृति दिनुपर्छ । अहिले नेप्सेमा निवेदन दिएका कम्पनीहरूमध्ये केहीको सिफारिश राष्ट्र बैंकमा पुगेको जानकारी छ । कतिपय कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ । सम्भवतः जति पनि कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका छन्, ती कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढाएर नेप्सेले छिट्टै स्वीकृति दिन्छ जस्तो लाग्छ ।
मार्जिन कर्जाका लागि कति ब्रोकर कम्पनी योग्य होलान् ?
हालसम्म २० ओटाको हाराहारी कम्पनीले नेप्सेमा निवेदन दिएका होलान् । ५० ब्रोकर कम्पनीमध्ये हाललाई ५० प्रतिशतजति योग्य छौं । नयाँ आर्थिक वर्ष आउँदै छ हालसम्म पूँजी नपुर्‍याएकाले पनि पुर्‍याउलान् । मार्जिन कारोबार स्वैच्छिक भएकाले पूँजी पुगेकाले पनि इच्छाअनुसार गर्ने भए । तर पनि धेरै ब्रोकरहरू यो कारोबारका लागि इच्छुक छन् ।
ब्रोकरहरूलाई पनि स्टक डिलरको काम गर्ने वातावरण बनाउने नेप्सेको योजना छ । यसमा ब्रोकरहरूको धारणा के छ ?
हामीले धेरै पहिलादेखि नै ब्रोकरले पनि स्टक डिलरको काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएका हौं । वास्तवमा यो हामीहरूकै मागबमोजिम नै हुन लागेको हो जस्तो लाग्छ । यसले बजारमा हलचल ल्याउन सहयोग गर्छ । ब्रोकरहरू यही क्षेत्रमा काम गर्छन्, उनीहरू यो क्षेत्रमा बढी जानकार पनि हुन्छन् । त्यसैले जसलाई थाहा छ, त्यसलाई काम गर्ने अवसर थप गर्ने हो । अर्को कुरा, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि कतिपय देशमा त ओभरल मार्केटको भोल्युममध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी ब्रोकरले नै कारोबार गर्ने गर्छन् । त्यस हिसाबमा हामीले पहिलेदेखि नै माग गरेका थियौं । यसमा नेप्से र सेबोन पनि सकरात्मक छन् ।
स्टक डिलरका लागि पनि पू“जीवृद्धिको कुरा हुन्छ होला नि ?
हामीले सुविधाहरू थप गर्न माग गरिरहँदा यही पूँजीमा सबै काम गर्न दिनुस् भन्न मिल्दैन । हामीले सुविधा दिनुस्, तर पूँजीको कुरामा हामी खुला छौं भनेका छौं । स्टक डिलरका लागि १० करोड पूँजीको कुरा आएको छ । यसमा जसले पु¥याउँछ, उसले गर्छ । तर निर्णय गर्दा धेरैले काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुने थियो ।
ब्रोकरहरूको साझा समस्या के के छन् ? समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षले के पहल गर्न आवश्यक छ ?
हाम्रा समस्या त धेरै छन् । हामीले गरेका धेरै माग पूरा भएका छैनन् । भर्खर मार्जिन लेन्डिङ, स्टक डिलरका कुराहरू आइरहेका छन् । हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म यही बजारलाई हेरिरहेका हुन्छौं । जति पनि लगानीकर्ता आउनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला ठोक्किने भनेको ब्रोकरहरूसँग नै हो । हाम्रो देशमा बजारको बारेमा जानकारी दिने बाहिर जस्तो ट्रेनिङ सेन्टरहरू पनि छैनन् । त्यस्ता लगानीकर्तालाई हामीले सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ । तर हामी कानूनी रूपमा सल्लाह दिन सक्दैनौं ।
त्यो हिसाबले हामीले एड्भाइजरी सर्भिस र पोर्टफोलियोको कुरा उठाइरहेका हौं । अर्को कुरा, अनलाइन आइसकेपछि ब्रोकरहरूलाई सहज शाखा विस्तार गर्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो । यसले ब्रोकरहरूलाई मात्र होइन, समग्र बजारलाई नै फाइदा हुने थियो । जसरी हामी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको पूँजीबजार निर्माणको परिकल्पना गरिरहेका छौं, त्यही रूपमा निर्णयहरु भइदिए राम्रो हुने थियो ।
‘बैंकरलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर पूँजी बजारको विकास हुँदैन’, त्यसोभए के गर्नुपर्ला ?
२६ बैशाख २०७६, बिहीबार १५:२८
२६ फाल्गुन २०७५, आईतवार ०८:१६
१५ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०७:१४
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०६:०४